သာကေတရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ | iMyanmarHouse.com
သိန်း 2000 မှ သိန်း 4000 ထိ သာကေတမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
သာကေတမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8015895 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သာကေတမြို့နယ်၊ သန်လျင်တံတားအိမ်ရာဝင်းရှိ ရောင်းရန်ရှိသောမြေကွက်(Malihku Real Estate)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8005679 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(60'x105')အကယျြ၊ သာကတေ၊ ရတနာအိမျရာ မွကှေကျ ရောငျးရနျရှိ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7999020 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သာကတေမွို့နယျ,မွကှေကျအရောငျး.(Hs 01171) ရတနာအိမျရာတှငျ တညျရှိသည
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7910023 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ခွံကယျြကယျြ နလေိုသူမြားအတှကျ ဈေးတနျရမညျ မွကှေကျအရောငျး သာ​​​ကတေ​မွို့နယျ (hs 01181) _ မွခှာညိုအိမျရာ (ဝါဝါဝငျး)တှငျတညျရှိသညျ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7909835 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပေအကျယ် (30'x80') မြေကွက်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7888937 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သာကေတမြို့နယ်,မြေကွက်အရောင်း.(Hs 01171) ရတနာအိမ်ရာတွင် တည်ရှိသည်.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7882764 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ခွံကယျြကယျြ နလေိုသူမြားအတှကျ စြေးတနျရမညျ မွကှေကျအရောငျး သာ​​​ကေတ​မွို့နယျ မွခှာညိုအိမျရာ (ဝါဝါဝငျး)တှငျတညျရှိသညျ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7879450 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သာကေတမြို့နယ်,မြေကွက်အရောင်း.(Hs 01171)- ရတနာအိမ်ရာတွင် တည်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7858188 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သာကေတ ရတနာအိမ်ရာတွင် (မြေ) ထောင့်ကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7849934 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်